अब कलेजो प्रत्यारोपण गर्न नपर्ने, विकसित गर्न सकिने ! « Pen Nepal
अब कलेजो प्रत्यारोपण गर्न नपर्ने, विकसित गर्न सकिने !
Published On : 28 August, 2020 8:21 am By : पेननेपाल
एनवाई पोस्टका अनुसार पिट्सबर्ग युनिभर्सिटीका वैज्ञानिकले ६ सुँगुरको लसिका ग्रन्थी ९लिम्प नोड० मा पूर्ण आकारको कलेजो विकसित गरेका छन् । परीक्षण यदि जनावरको एक अंग कुनै रोगका कारण खराब हुन सुरु भएपनि यो स्वस्थ रहने पत्ता लागेको छ । उनीहरुको शरीरले अन्य अङ्ग तयार गर्न सक्छन् ।
अनुसन्धान गर्ने वैज्ञानिक डा। एरिक लागेस भन्छन्, ‘यदि हेप्याटोसाइट्सलाई सही स्थानसम्म पुर्याइन्छ भने नयाँ कलेजो विकसित गर्न सक्छ । साधारणतया स–साना क्षती त कलेजो आफैंले निको पार्ने गर्छ ।’